कसरी राप्रपाको झोलीमा पर्‍यो काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका? :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
कसरी राप्रपाको झोलीमा पर्‍यो काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका?
काठमाडौंको शंखरापुरको मेयर पदमा जित हात पारेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तरंग श्रृजना गरिदिएको छ।
उपत्यकाको प्राचिन बस्ती रहेको साँखु र आसपासको क्षेत्र समेटिएको शंखरापुरमा राप्रपाले लामो प्रतिक्षा पछि जीतको स्वाद चाख्न पाएको हो।
राप्रपाका रमेश नापितले एकीकृत समाजवादीका लक्ष्मीप्रसाद श्रेष्ठलाई हराएका हुन्।
शंखरापुर विगतमा नेकपा एमालेको राम्रो मत भए पनि विभाजनको फाइदा राप्रपालाई मिलेको हो। सत्तारूढ गठबन्धनमा भागवण्डामा माधव नेपालको निर्वाचन क्षेत्र पनि भएका कारण एकीकृत समाजवादीले शंखरापुरमा भाग पाएको थियो। तर उसले गठबन्धनलाई एक ठाउँमा राख्न असफल भयो।
त्यसो त शंखरापुर नगरपालिकामाका वडा नं ६ र ७ मा राप्रपाले सँधै पकड राख्ने गरेको थियो। पुराना नेता जोगमेयर श्रेष्ठको गाउँमा राप्रपा बलियो शक्तिको रुमपा रहेको थियो। 'अघिल्लो पटकको स्थानीय तहको चुनावमा हामीले वडा नं ६ र ७ मा जितेका थियौँ', राप्रपाका नेता, 'मिजेन्द्र श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ' यसअघि पुकलाछी र बज्रयोगिनी गाविस राप्रपाले जितिराखेकै ठाउँ हो। त्यहाँ हाम्रो राम्रो जनाधार छ।'
राप्रपाको जितमा रमेश नापितको व्यक्तित्वले पनि असर पारेको छ। उनले अघिल्लोपटक प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि राम्रो मत प्राप्त गरेका थिए। उनले त्यतिबेला ३५८८ मत प्राप्त गरेका थिए। मिजेन्द्रका अनुसार नेपाली कांग्रेसले त्यतिबेला गठबन्धन गर्ने वाचा गरेर मुख नफेरेको भए नापित प्रदेश सभा सदस्य चुनिने थिए।
'तर एक्लै चुनाव लड्दा पनि सम्मानजनक मत पाएका थियौँ', उनले भने, 'हामीले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि राम्रो मत ल्याएका थियौँ। त्यसैले हामीले यो निर्वाचनका लागि पाँच वर्ष संगठन विस्तारमा ध्यान दियौँ।'
२०७४ सालको निर्वाचनमा राप्रपाका मिनेन्द्रकाजी श्रेष्ठले तेश्रो स्थानमा रहदैँ २४६१ मत ल्याएका थिए। यसपटक नापितले जित्दै गर्दा ४७०० मत प्राप्त गरेकोबाट उनको जितको पछाडी सांगठनिक तागत देखिन्छ।
'रमेश नापित राप्रापको स्थापना देखि नै राजनीतिमा लाग्नु भएको हो', मिजेन्द्रले भने, 'उहाँको प्रभाव पनि राम्रो छ।'
राप्रपाको साँखु क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव रहेको छ। त्यहाँको खानेपानी समितिको निर्वाचनमा समेत एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायतका मुख्य शक्ति एकातर्फ उभिदाँ समेत राप्रपाले जित हात पारेको थियो। 'साँखु क्षेत्रमा राप्रपाको पकेट एरिया छ', शंखरापुरका एकीकृत समाजवादीका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, 'कांग्रेसको भोट पनि उनलाई गएका कारण एकीकृत समाजवादीलाई अफ्ठ्यारो पर्‍यो।'
ती नेताका अनुसार भनेजस्तै शंखरापुरको उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी समिता श्रेष्ठ निर्वाचित भएकी छिन्। उनले ६३०० मत प्राप्त गरेकी छिन्। गठबन्धनको भोट एकीकृत समाजवादीलाई नगएपछि राप्रपालाई जित थप सहज भएको हो। 'कांग्रेसले एकीकृत समाजवादीलाई भोट नदिउँ भनेन तर भोट पनि मागेन', ती स्थानीय नेताले भने, 'फाइदा रमेश नापितलाई भयो।'
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ४, २०७९, ०५:१९:००